Jawaari oo ka hadlay arrinta Mooshinka isla markaana sheegay in maalinta Isniinta la hor keenayo Baarlamaanka. | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Local News Jawaari oo ka hadlay arrinta Mooshinka isla markaana sheegay in maalinta Isniinta...
Jawaari oo ka hadlay arrinta Mooshinka isla markaana sheegay in maalinta Isniinta la hor keenayo Baarlamaanka.
Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya Prof Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa warbaahinta la hadlay maanta isaga oo socdaal ugu siijeeday dalka Jabuuta, waxa uuna sheegay in maalinta Isniinta ah la horkeenayo Baarlamaaanka mooshinkii horay loogu soo gudbiyay.
Mr Jawaari ayaa sheegay in aan la qabali Karin habsaanka ku yimid kalfadhiyadii golaha baarlamaanka, isla markaana la sii heyn karin mooshinka oo muddo 15 cisho ka hor Gudoonka loo soo gudbiyay ilaa iyo haddana ay suura geli la’dahay in la horkeeno baarlamaanka.
Gudoomiyaha ayaa sheegay sidoo kale in aan loo dulqaadan doonin Xildhibaanada buuqa iyo fowdada ay sameynayaan xilliga la furo baarlamaanka, isla markaana tallaabo uu ka qaadayo.
“Xildhibaan walba waxaa laga doonayaa inuu xilkiisa guto, mana yeelanayo mana u dulqaadanayo wax buuq iyo is horistaaga, waana ceeb inaan taas iska joojino ayaa nagala rabaa. ”ayuu yiri Jawaari.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa ay u fadhiisteen laba mar kalsooni kala noqoshada Ra’iisal wasaaraha Xukuumadda Fedraalka ah, kaddib markii khilaaf ba’an uu soo kala dhex galay madaxweyne Xasan Sheekh iyo R’iisal wasaaraha, kaas oo ka dhashay isku shaandheyn uu Ra’iisal wasaare Cabdiwali Sheekh ku sameeyay golaha wasiirradda.
Kal fadhiga Baarlamaanka ayaa u qabsoomin sidii la doonayay, waxaana is hor taagay mooshinka xildhibaano fowdo iyo buuq billaabay iyaga oo si xoog leh uga soo horjeestay mooshinka kuna dhawaaqayay in ay mooshin lacag ku badalasha ah marnaba aqbali doonin.
Previous articleShirka Hiigsiga cusub ee Soomaaliya oo furmay
Next articleGuddoomiye Jawaari oo Muqdisho kusoo laabtay iyo Mooshin berri loo balansan yahay